DHAGEYSO:Xildhibaano hore oo bayaan soo saaray – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Xildhibaano hore oo bayaan soo saaray
Star FM January 11, 2019
Mudanayaal horay uga tirsanaa baarlamaanka dalka oo ku midoobay ururka FOPA ayaa maanta shir jaraaid qabtay.
Waxay soo bandhigeen bayaan ay ku soo jeediyeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay si weyn u taagerayaan heshiikii 9-kii bishii saddexaad ee sannadkii hore dhexmaray madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo madaxa urur weynaha mucaaradka Nasa, Raila Odinga.
Waxay sido kale dhaliil u jeediyeen xildhibaano ay sheegeen inay dhawaan u gafeen madaxweynaha dalka.
Sido kale xildhibaanadan hore oo isugu jiro rag iyo haween ayaa ammaanay haweenka horay u qabtay shirar jaraaid oo ay uga hadleen arrimaha wadanka ka taagan.
Sido kale siyaasiyiintan hore ayaa ka hadlay arrimaha la xariira aftida la doonayo in loo qaado dastuurka wadanka u degsan iyagoo kenyaanka ku booriyay inay soo doortaan madaxa sida ay hadalka u dhigeen habdhaqan wanaagsan.
Madaxweynaha ayay ku booriyeen inuunan ka daalin la dagaalanka musuqmaasuqa waxayna hoosta ka xariiqeen inay soo dhaweynayaan midnimada wadanka ka jirta iyo qorshaha horumarineed ee dowladda ee ku saleysan wax soo saarka, adeegyo caafimaad oo dhameystiran, guriyeynta iyo la tacaalidda cunno yarida.
Xassan Cismaan oo horay uga tirsanaa baarlamaanka ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada ku xusan bayaanka ay soo saareen xubnaha ururka xildhibaanadii hore ee FOPA
← Kal-Fadhigii Afaraad Ee Aqalka Sare Oo Soo Xirmay
DHAGEYSO:Dhalinyarada iyo dumarka ismaamulka garissa oo loo qoondeeyay lacag dhan boqol iyo kontan milyan oo shilin. →